Lahatsary: Anaty Rano i Amerika Afovoany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Oktobra 2011 7:34 GMT
Lalambe tondraky ny rano ao El Salvador
Nitondra oram-batravatra sy orana naharitra andro maro nanerana an'i Amerika Afovoany ilay andro ratsy 12-E, niteraka tondra-drano, fanakatonana ireo làlana sy lalambe migodana ary famindràna toerana olona. Amin'ny alalan'ity lahatsoratra ity no ahitantsika ireo fiantraikan'ny ranon'orambe nanerana ireo firenena maro ao Amerika Afovoany.
Inversiones Digitales dia mampiseho amintsika ny toetry ny làlana any amin'ny faritra atsimon'i Malcovia Choluteca any Honduras, ary angatahany ny mba hitsidihan'ny filoha an'io faritra atsimo io, amin'ny fanindriana fa tokony handefa tafika any izy hanorina fefiloha sy hala tsara ny fasika amin'ireo renirano.
Ireto lahatsary manaraka ireto dia mampiseho amintsika ny faritra ambanivohitra tondraky ny rano, ny làlana rakotry ny rano ary ny fitroatry ny renirano izay mampahatahotra tokoa ireo mponina any Nicaragoa:
Ao Goatemala fotsiny, ny tondradrano sy ny fihotsahan'ny tany dia nahafatesana olona ampolony mahery. Ao anatin'ilay famaritana ilay lahatsary momba ny fihoaran'ny renirano Los Esclavos, Diario La Hora GT no manazava:
Goatemala no ahitàna ny fahavoazana be indrindra satria olona 15 no maty ary maherin'ny 52.000 ireo tra-boina, tetezana nianjera, arabe nakatona ary fanakatonana ny sisintany mampifandray azy amin'i El Salvador, araka ny vaova ofisialy
“Olona 15 no maty aty aminay, efatra tsy hita popoka, 938 anaty trano vonjimaika, 1570 nafindra toerana, 8716 ireo tra-boina. Ary koa, misy ampahan-dàlana 50 sy tetezana valo niharam-pahavoazana”, hoy ny nanambaran'ny Filoha Lefitra Rafael Espada nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety
Ny vondrom-piarahamonin'ny Garita Palmera ao El Salvador dia nandefa antso ho an'ireo manampahefana mba handefa fanampiana, tsy hoan'ireo toby vonjimaika ihany, fa ho an'ny vondrom-piarahamonina rehetra mihitsy, satria marobe ireo olona no tsy any amin'ireny toby vonjimaika ireny, ary tsy voazara mitovy ny fanampiana. Vehivavy iray avy amin'ilay vondrom-piarahamonina ihany koa no manindry fa niantraika tamin'ny fahafahan'ireo olona ireo mitady fivelomana ihany koa ilay orambe, noho izany dia ho tsapan'ny rehetra mandritra ireo volana ho avy ny fiantraikan'ireo orambe sy ny tondradrano, tsy ireo izay voatery nandao ny fonenany ihany.
Avy amin'ilay vondrom-piarahamonin'ny Garita Palmera ihany koa, ireto lahatsary roa manaraka ireto dia mampiseho ny fahavoazan'ny làlana. Ao anatin'ilay lahatsary voalohany, rakotra rano ny arabe ary mitsapatsapa any ny olona, ao anatin'ilay manaraka, efa nisintona ny rano ary dia taza-maso tsara mihitsy ny fahavoazana.
Ny bilaogy Voices from El Salvador, na Feo Avy Ao El Salvador, dia nanaraka akaiky ilay loza voajanahary ary dia nanao famoriam-bola ry zareo mba hanampiana ireo tra-boina noho ny orana.
Ity lahatsary manaraka ity dia mampiseho sary avy amin'ny ezaka famonjena misy eny anivon'ireo vondrom-piarahamonina tratry ny tondradrano ao El Salvador, toerana izay ahitàna ireo mpanao asa famonjena manala ny olona amin'ireo toerana mety hamoa-doza mba ho amin'ny azo antoka
Gringa ao El Salvador dia mijoro eo anaty orana mba hanazava ny hoe ahoana izany herinandro nisy orana tsy nitsahatra izany. Ao amin'ny bilaoginy, izy dia mampakatra torohay sy fanavaozam-baovao mikasika ny voka-dratsin'ilay oram-batravatra tao El Salvador.